ခံရခက်လေသည် | CeleTrend
သူတို့ မှာလည်း ပစ္စည်းကိရိယာ အစုံအလင် ရှိသည်၊ အပျို ဘ၀ ထဲ က နေ့စဉ်လိုလို လုပ်လာခဲ့တော့လည်း အကျင့်ပါနေပြီ မနက်အိပ်ယာထ လို့ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်လိုက်ရရင်တောင် ညှောင်းညာ သလို ဖြစ်နေတတ်သည်၊ လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်တဲ့ အကျိုး ကျေးဇူးကတော့ တကယ်ခံစားရသည်၊ တခြား မိန်းခလေး တွေနူင့် ယှဉ်လိုက်လျှင် ယောက်ကျားတွေ ရဲ့ မျက်လုံးက သူ့ အပေါ်မှာ အများဆုံးရောက်နေတာ ကို အမြဲတမ်း သတိထားမိနေသည်၊ လူကလည်း အမြဲတမ်း လန်းဆန်းနေသလို၊ ယောက်ကျားများ၏ အာသာငမ်းငမ်း အကြည့်တွေကို လည်း သာယာမိသည်၊ သွေးသား လှုပ်ရှားမှုအား ကောင်းသလို ကာမဆန္ဒ နိူးကြွမှု မှာလည်း အားမသေး ခြေ၊ သူ နူင့် ကိုတင်ထွတ် အိမ်ထောင်ကျ ပြီး ကထဲက ည တိုင်းလိုလို အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်၊ ကိုတင်ထွတ် အလုပ်ကိစ္စ နူင့် ခရီး ထွက်ရသည့် အခါ၊ ပထမ ဆုံး အကြိမ်က တခါမှ မခွဲ ဘူးတော့ တော်တော်လေး ခံစားရသည်၊ သို့သော်လည်း တဖြေးဖြေး တော့အသားကျ သွားသည်၊ ဒါပေမဲ့ တပတ်လောက်ဆိုရင် မနေနိူင်တော့ သူ့ဘာသာ သူ လက်နူင့် အယားဖျောက် ပစ်ရသည်၊ အခု တခေါက်က တော့ တော်တော့် ကိုကြာသည်၊ ရာသီက လည်းပြောင်းတော့ပစ္စည်း ကောက်ရတာ နောက်ကျ ပြီး အလျှင်မမှီ ၍ ကိုတင်ထွတ် လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး နေနေရတော့ ၀င်းပပ အဖို့ နွေရာသီ က သစ်ရွက်ခြောက်လို မီးဖွားကျ တာ နူင့် မီးထလောင်နိူင်သည့်အခြေအနေရောက် နေ သည်၊ ညအိပ်ရာဝင် တိုင်း သူမ လက်ခလေး နူင့် အစေ့ လေးကို နာနာ ပွတ် ရင်း တချီလောက်ပြီး မှ ပဲ အိပ်လို့ ပျော်တော့သည်။ အလုပ်ထဲ မှာကလည်း ဖေဖေ က လွဲလျှင် သူက အကြီးဆုံးမဟုတ်လား၊ ဖေဖေ ကလည်း အထိန်းအကွပ် ရရုံ လောက် နာမည်သာ ခံထားတော့သည်၊ သူကသာ အရာရာ ဆုံးဖြတ် လုပ်ကိုင်နေ ရခြင်းကြောင့် ၀န်ထမ်း အကုန်လုံးက ကြောက်ရွံ့ ရိုသေ ကြရသည်၊ နောက်ပြီး ကျောင်းမပြီး မှီထဲက စ အလုပ်ထဲ ခြေစုံပစ် ၀င်ခဲ့ ရသဖြင့် သူ့မှာက အလုပ်နူင့် ပတ်သက်သော အသိုင်းအ၀ိုင်း က ပိုကြီးစိုးခဲ့သည်၊ အတိုချူပ်ပြော ရလျှင် သူ့ဘ၀ လောလော ဆယ်မှာ အိမ်၊ အလုပ်၊ နူင့် ကိုတင်ထွတ် ပဲ ရှိသည်။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက် ၍ တွေ့ဆုံ ဆက်ဆံ နေခဲ့ ရသော ယောက်ကျားသနာ တွေကလည်း သူ့ကို လန့်ကြသဖြင့် လိင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော မိန်းမတယောက်ဖြစ်သည်ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုရဲ့ သားဖြင့် သူမသိအောင် ဖုံးကွယ်ထားကြသည်။ အင်း ဒီကောင်လေး တယောက်ပဲ၊ ၀င်းပပ အတွေးထဲမိုးအောင်သူ ၀င်လာသည်၊ မိုးအောင်သူ ကို မမျိုး ပြောပေး၍ ခန့်လိုက်ပြီးမှ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်လေး သဘောကျပြီး အဆင့်ဆင့် တိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ထားခဲ့သည်၊ ထိုအခါမှ စ၍ သူ့ကို အဓိက အရေးကြီးလုပ်ငန်း အရေးအရာ များကို ၀င်ပါစေ ပြီး ထရိမ်နင် သဘောမျိုးမောင်း လာခဲ့သည်၊ မိုးအောင်သူ ကလည်း အချိန်ပိုတွေ ဘာတွေ အဓိက မထား လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ခိုင်းသမျှ လုပ်ပေးလေ့ရှိတော့ဝင်းပပ လည်း သဘောကျလာခဲ့သည်၊ ကိုတင်ထွတ် နေရာကို လွှတ်ပြီး ကိုတင်ထွတ်ကို သူ့ အနားပြန်ခေါ်ထား တော့ မည်ဟုတွေးထားသည်၊ သို့ သော် အခု တလော သူပဲ စိတ်ထင်လို့ လား မသိကောင်လေး အကြည့်တွေက နည်းနည်း ဆန်းသလိုလို၊ သူက မသိချင်ယောင် ဆောင်ပြီး မှန်ထဲ မှ ဖြစ်ဖြစ် မျက်လုံး ဒေါင့်ကပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တခါ တလေ ကြည့်လိုက်လျှင် သူ့ ကို ခိုးခိုး ကြည့်နေတတ်တာ သတိထားမိနေ
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဆိုတော့ အထင်ကြီး သည်၊ ရီးစားစာ တစောင်နူင့် ပင် သမီးရီးစား ဘ၀ရောက်ခဲ့ ကြသည်၊ ထိုကောင်မလေးကို တော့ မိုးအောင်သူ ပါကင် ဖွင့်လိုက်ရသည်၊ ကောင်မလေး အိမ်မှာ လူကြီးတွေ မရှိချိန် အိမ်နောက်ဖေး ပေါက်က ပတ်ဝင်ပြီး ကောင်မလေး ကို အခန်းထဲအတင်းဆွဲခေါ် ဖက်နမ်းရင်း ပါကင်ဖွင့်လိုက် သည်၊ နောက် တော့လစ်ရင်လစ် သလို ၀င်ဝင်ဆွဲသည်၊ သိပ် အကြာကြီးတော့ မခံလိုက်၊ ကောင်မလေး မိသားစု နယ်ပြောင်းသွားတော့ ဝေးသွားကြရသည်၊ တက္ကသိုလ်တက် နေတုန်း ထိုကဲ့ သို့ အိမ်ဘေးမှ ကောင်မလေး နူင့် ညိနေ သဖြင့် မိုးအောင်သူ တယောက် ကျောင်းမှာ ရီး စား မထားဖြစ်လိုက်ခြေ၊ တယောက်နူစ်ယောက် စမ်းလိုက်သော်လည်း အဆင်မပြေ၊ အိမ်ဘေးမှာ စားစရာက လည်း ရှိနေတော့ သိပ်လည်း မကျိုးစားချင်တော့ တာလည်း ပါလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။ ကျောင်းပြီးသွားတော့ လည်း သူများ တွေလိုဟေးလားဝါးလား လုပ်ဖို့ အချိန်မရ တော့ အိမ်က စီးပွားရေး အခြေအနေကြောင့် ရသည့် အလုပ်ကလေး ကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်နေရ သဖြင့် ရီးစားသနာလည်း မထားဖြစ်သေး၊ လောလော ဆယ် သူ့ရောဂါကတော့ သူ့ လက်ရှိ ဘောစိ၊ သူ့သူဌေးမ ဒေါ်ဝင်းပပ ကိုသာ အသားကုန် လုပ်ချင် နေသည်။ ၀င်းပပ အလုပ်ထဲ ရောက်တော့ ဒီနေ့ ခေါက်ရိုးကျ ရှပ်အင်းကျီ သပ်သပ်ယပ်ယပ်နဲ့ ပလေကပ် ပုဆိုး အပျော့ ၊ နဲ့ သားနားနေသော မိုးအောင်သူ ကိုတွေ့လိုက်ရ ၏၊ ဆံပင်ရှည်ရှည် ဂုတ်ဝဲ လေးနူင့် နုပျိုသေးသော မျက်နှာလေး နူင့် စူးရဲသော မျက်လုံး အစုံက သူ့ရင် တချက်ဖိုသွားသည်၊ အင်း ငါလည်း ကိုတင်ထွတ် နဲ့ ဝေးနေရတာ ကြာလို့ထင်တယ်၊ စိတ်တွေ လေနေတယ်၊ ဟု ကိုယ့်ဘာသာ သတိချူပ် ရင်း အလုပ်စလုပ်တော့သည်၊ စာရင်းတွေပေါင်း ဖုန်းတွေ ခေါ်စရာရှိတာတွေ ကြောင့် မိုးအောင်သူ ကို သူ့ရုံးခန်းထဲ လာပြီး ကူလုပ်ခိုင်းထားလေသည်။ ..ဟောတော့ ထမင်းစားချိန်တောင် လွန်နေပြီ၊ မောင်မိုးအောင်သူ ရော ဆောရီးနော် ဗိုက်ဆာနေပလား..ရတယ် မမ၀င်း ဒီလောက်လဲ မဟုတ်သေးပါဘူး.. မင်း ထမင်းဘူး ပါလာလား၊ .. ….ဒီနေ့ မပါဘူး မမ၀င်း..ကျနော် ဒီနားပဲ ထွက်စားမလားလို့.. ..အော်ဟုတ်လား မမ လည်း ဒီနေ့ အိမ်က ဘာမှ မပါလာဘူး ထွက်စားရအောင် မမ တို့နဲ့ လိုက်ခဲ့.. ရွှေစင်..ရေ..ဟေ့ ရွှေစင် တို့ တခုခု သွားစားရအောင်ဟေ့.. ဒေါ်ဝင်းပပ က တဆက်တည်း သူနဲ့ အဖေါ်လိုက်နေကြ ကောင်မလေး တယောက်ကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ ဟင်..မမ က ကြိုမပြောထားလို့ ရွှေစင် အိမ်က ပါလာတဲ့ ထမင်းဘူး စားလိုက်ပြီ၊ အဟီး..လိုက်ခဲ့မယ်လေ မမ အဖေါ်ရအောင်.အော်အော် အေး ငါလည်း မေ့သွားလို့ ..စားပြီးရင်လည်း နေခဲ့တော့ မိုးအောင်သူလည်း ပါမှာပဲ မမ ခနထွက်သွားလိုက်အုန်းမယ်..ဟို လူတွေဖုန်းခေါ်ရင်. ဒေါ်ဝင်းပပ က မှာစရာရှိတာလေးတွေ မှာခဲ့ပြီး မိုးအောင်သူနဲ့ အတူ သူ့ကားလေး ရပ်ထားတဲ့နေရာကို ဆင်းလာခဲ့ကြသည်။ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ ဒီနေ့ အလုပ်တခု ပြီး ရင် အလုပ်က နည်းနည်း ပြန် အားသွားမှာမို့ စိတ်ပေါ့ပါး နေ၏၊ မိုးအောင်သူ နူင့် စားသောက်ဆိုင်တခု တွင် ၀င်စား ကြရင်းက မှစကားစမြည် ပြောဖြစ်ကြသည်၊ ..ဟူး ငါတို့ မှာလည်း အလုပ်တွေ ပိနေတာနဲ့ စကားတောင် ကောင်းကောင်း မပြောဖြစ်ကြဘူးနော်..ဟုတ်ကဲ့ မမ၀င်း..မမ၀င်းက အလုပ်တအားလုပ်တာကိုး.. ..အဲလောက်လဲ ဟုတ်ပါဘူးကွာ ဖေဖေ က မျက်နှာလွဲထားတယ် ဆိုတော့ ကိုယ့်လက်ထဲ မှာ မကျဆင်းသွားစေချင်ဘူးလေ..မောင်မိုး ရဲ့ အကူညီလည်း ပါပါတယ်၊ မောင်မိုးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ..ဟာမဟုတ်တာ မမ၀င်းကလည်း မမ၀င်း တို့ ကျေးဇူးကြောင့် ကျနော် ဒီအလုပ်လုပ်ရတာပါ.. ..ကဲ ပါ အဲဒီအကြောင်းတွေ ပြောမနေပါနဲ့ ကဲ မင်း အကြောင်းလေး ဘာလေးပြောပါအုန်း.. ..ဟာ မမ၀င်းက လည်း ကျနော့် အကြောင်းက ဘာမှ စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းပါဘူး၊ .အံမယ် မင်းလို အရွယ် ရုပ်ရည်မျိုးနဲ့ များ၊ ပြောစမ်းပါအုန်း ကောင်မလေး ဘယ်နူစ်ယောက် အသဲကွဲ ပြီးပလဲ.. ..အာ မမ၀င်း ကလည်း လုပ်ပြီ၊ ကျနော့်မှာ ရီးစားတောင် မရှိသေးပါဘူး..ပေါက်ကရတွေ၊ ဟဲဟဲ.. မယုံပါဘူးကွာ..ဘာလည်း ..ကြိုက်စရာကောင်း တာ မတွေ့သေးလို့လား..ဟီးဟီး မမ၀င်း ခြေဖျားလောက်မှီအောင် ချောတဲ့သူ တွေ့ရင်တောင် ကျနော်က လိုက်မှာ.. ဟိုက်..မိုးအောင်သူ တယောက် သူ့ပါးစပ်က စွပ်ရွတ်ထွက်သွားပြီးမှ ကိုယ့်ပါးကိုယ်ပြန်ရိုက်ချင်စိတ် ပေါက်သွားသည်၊ လခွီးမှ ပဲ ဒီစောက်ပါးစပ်နဲ့ တော့ အလုပ်ပြုတ်တော့မှာပဲ၊ ဟုလန့်သွားသည်။
သို့သော် ဒေါ်ဝင်းပပ က အပြုံးမပျက် ရီမောရင်း၊ ကဲကဲ ..စားပါကွာ မမကျွေးပါ့မယ် ငါ့မောင်က ဒီလောက်တောင် မြှောက်နေစရာမလိုပါဘူး၊ကွာ ဟင်းဟင်း အဲတော့လည်း ချော်လဲ ရာ ရောထိုင်လိုက်တာပေါ့။ တကယ်ပြောတာ ပါ မမ၀င်း ရဲ့ မမ၀င်း လိုမျိုး ချောပြီး ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် လှတဲ့သူမျိုး မိန်းခလေး တထောင်မှာ တယောက်ရှာလို့တောင် မတွေ့နိူင်ပါဘူး၊ …. ….တော်ပါပြီ ကိုပိုရယ် ..ဟင်းတွေ အေးကုန်မယ် စားလိုက်ပါအုန်းညနေဘက် အလုပ်ဆင်းတော့ ဒေါ်ဝင်းပပ စာရွက်စာတမ်း များ ကို စက္ကူပုံးတလုံး နဲ့ ထည့် ပြီး မိုးအောင်သူ က ကားနား အထိလိုက်ပို့ရင်းမှ မမ၀င်း ကျနော် အိမ်အထိလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ ကျနော် အဲဒီဖက် ပိုင်းလည်း သွားစရာရှိတယ်၊ အဟီး မမ၀င်းကားနဲ့ လိုက်ရတော့ ဘတ်စ်ကား တွယ် မစီးရတော့ဘူးပေါ့၊.. မိုးအောင်သူ က ဘာရယ်မဟုတ်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ နားကပ် ရေမွေးနံ့လေးရူ ၊သူ့ဘော်ဒီကို မသိမသာ ခိုးကြည့် ရတာ ဖီးတက်နေလို့ ကြံဖန် ရမယ်ရှာနေတာ၊ ဒေါ်ဝင်းပပ ကလည်းခေါ်သွားခဲ့သည်။ ကောင်လေး ခိုးခိုးကြည့်နေတာ လည်း သူသိသည်၊ ဘာမှန်းမသိ သူ့ရင်မှာ ကျေနပ် ပီတိ ဖြစ်ရုံ မက သူပိပိ လေးမှာလည်း စိုထိုင်းထိုင်း ဖြစ်နေရပါသည်။ အိမ်ရောက်တော့ မနော် က တံခါးလာဖွင့်ပေးရင်း၊ ..အ၀င်း စားတော့ မလား မနော် ပြင်ထားလိုက်၇မလား.. ..မစားသေးဘူး မနော်ရေ မနော် လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ပါ နောက်မှ ခေါ်လိုက်မယ်၊..အင်းအင်း ..ဒါဆို မနော် ရေချိုးလိုက်အုန်းမယ်၊ ခနနေရင် ကိုတင့် ပြန်ရောက်တော့မှာပါ..အော် သူဇာနဲ့ ဖိုးသက် ကို သွားကြိုတာလားကဲ မောင်မိုးရေ အဲဒီစက္ကူပုံးလေး တခါထဲ အပေါ်ထပ်လိုက်တင်ပေးပါအုန်း၊..ဟုတ်ကဲ့ မမ၀င်း.. မိမိ ရှေ့မှ လှေခါးပေါ် တက်သွားသော ဒေါ်ဝင်းပပ ၏ နိမ့်တုန် မြင့်တုန် တင်ပဆုံနူင့် သေးကျင်သော ခါးက မိုးအောင်သူ ၏ ငတ ကို မာတင်းလာစေပြီး ဒူးတောင် ညွတ်ခွေကျချင်လာခဲ့ရသည်။ အိမ်ကြီးတလုံးလုံးက လည်း တိတ်ဆိတ် နေတော့ မိုးအောင်သူ စိတ်တွေ ထကြွလာခဲ့ရသည်။ ၀င်းပပ မှာလည်း သူ့နောက်က နေ မိုးအောင်သူ တယောက်သရည်တမြှားမြှား ဖြစ်နေမည်ဆိုတာကို သိနေသည်၊ သူကိုယ်တိုင်က ပင် ပြချင်နေသည်၊ သူ့ပိပိ လေးထဲမှ အရည် တချို့ ပင် သူဝတ်ထားသော ပင်တီ ပေါ် စိုလာခဲ့သည်၊ တ ကယ်ဆို ဒီစက္ကူ ပုံးကို အောက်မှာပဲ ထားခိုင်းပြီး နောက်မှ ဦးလေး တင့်ကို တင်ခိုင်းလိုက်လည်း ရသည်၊ အခုတော့ သူကိုယ်တိုင်က ပင် ခပ်ကဲကဲ ဖြစ်နေသလားမသိ၊ သူ့အခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့် ၀င်လိုက်တော့ ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ် ခုံနေသည်၊ မိုးအောင်သူ မှာလည်း အိစက်ညက်ညောလှသည့် ၀င်းပပ တို့ လင်မယား ကုတင်ကြီး ကိုတွေ့ရတော့ ရင်တဒိန်းဒိန်းခုန်လာသည်၊ ဒီအပေါ်မှာသာ မမ၀င်း ကို လိုးလိုက်ရရင် ဟူသောအတွေးဖြင့် လက်တွေ ပင်တုန်လာ၏၊ ဒေါ်ဝင်းပပ က ..ကြမ်းမှာ ခနချထားလိုက်ပါအုန်းကွ မောင်မိုး ရဲ့ မလေးဘူးလား နေအုန်း ပြီးမှ ဒီနားမှာ တင်မလို့.. ဒေါ်ဝင်းပပ က တံခါး အနောက်ဘက်နားက ဘီရိုတခုကို ဖွင့်လို့ရအောင်တံခါးကို ပြန်စေ့လိုက်သည်၊ ထိုဘီရို အနားကို အသွား သူခြေထောက်က ကြမ်းပြင်ပေါ်က ဒေါက်ဖိနပ် တရံကိုသွားတက်နင်းမိပြီး ခြေခေါက်ကာ ချော်လဲ မလိုဖြစ်သွား၏။အမေ့ ခြေမြန်လက်မြန် မိုးအောင်သူ တယောက် လှမ်းထိန်းကာ ပွေ့လိုက်လို့ ကြမ်းပြင်နူင့် မျက်နှာ မအပ်မိခြင်း ဖြစ်လေသည်။ မမ၀င်း..ဘာဖြစ်သွားလည်းဟင်.. ..ခြေခေါက်သွားတယ် ထင်တယ်..အာခထောက် နည်းနည်း နာ သွားတယ်.. ..ရတယ် မမ၀င်း ခြေမထောက်နဲ့ ကျနော် ကုတင်ပေါ် သွားတင်ပေးမယ်.. မိုးအောင်သူ က သူ့ရင်ခွင်ထဲ အိစက်နေသော ဒေါ်ဝင်းမမ ကိုယ်လုံးလေး ကို မလွတ်ချင်လို့ အသာပွေ့ပြီး ကုတင်ဆီသယ်လာခဲ့သည်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ ရှက်သွေးဖြန်းပြီး လှချင်တိုင်းလှနေသော မျက်နှာလေး ကိုငုံ့ ကြည့်ရင်း မနေနိူင်တော့သော၊ မိုးအောင်သူ တယောက် ဒေါ်ဝင်းပပ ကို ကုတင်ပေါ် တင်လိုက်ရင်း တဆက်ထည်း နူတ်ခမ်းနုနု လေးကိုငုံ့ကာ နမ်းစုပ်လိုက်မိတော့သည်။
အင့်အားးးး ..အို့ အိုးးကွယ် ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ သူ့ အဖုတ်နူတ်ခမ်းဖတ် လေးကို မိုးအောင်သူက သူ့ နူတ်ခမ်းဖြင့် အသာဖိညှပ် ဆွဲ လိုက်ရာ ထွန့်ထွန့် လူးအောင် ခံစားလိုက်ရသဖြင့် အသံလေး ထွက် ငြီး ရုံ မက မိုးအောင်သူ ၏ ခေါင်းမှ ဆံပင်များကို ပင် အားမလို အားမရ ဆုပ်ကိုင် ဆွဲ လိုက် မိလေတော့သည်။ မိုးအောင်သူ ကလည်း ဒေါ်ဝင်းပပ ၏ ကြောင်မ ကဲ့သို့ ငြီး သံလေးကြောင့် ပို စိတ် ထက်သန်လာပြီး သူ့ လျှာကို ရှည်နိူင်သမျှ ရှည်အောင် ဆန့် ကာ ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ်တွင်း ထုတ်သွင်း ကစားလေတော့သည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ ပြတ်နေတာ ကြာပြီ ဖြစ်သော ကိုယ် ကြိုက်နူစ်သက်လှသည့် အစာ ကို ပြန်အမြည်း စားလိုက်ရ သူလို ဖြစ်နေပေရာ အရသာ အထွတ်အထိပ် ရောက် ပြီး ပေါင်တန်လေး နူစ်ချောင်း ဆန့်တန်းလျှက် တချီ ပြီးသွားရရှာတော့သည်။ ထိုအခါမှာ မိမိ လိင်တန်ကြီး တခုလုံးကလည်း မခံ မရပ်နိူင်အောင် တင်းမာ နေပြီ ဖြစ်သော မိုးအောင်သူ က ဒေါ်ဝင်းပပ ပေါင်နူစ်လုံးကြားမျာ ဒူးထောက် ထိုင်လျှက် သူ့ ပုဆိုးကို ဖြည်ချလိုက်လေသည်။ မိုးအောင်သူက ထောင်မတ် တင်းမာနေသော သူ့ လိင်တန်ကြီး ကို ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ်လှလှ အကွဲ ကြားမှာ အထဲ နားထိ ခေါင်းကို ဒစ်မြုပ်သည့် အထိ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ဒေါ်ဝင်းပပ မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ သူ့ လက်လက်နူစ်ဖက်ကို မြှောက်ကာ မျက်လုံးများပေါ် အုပ်ထားသည်ကို တွေ့လိုက်သည်။ အင်း ဒီတချီတော့ ရှိပါစေ ဦးပေါ့လေ၊ နောက်တခါဆိုရင် တော့ အဲ လို နေလို့ မရတော့ဘူး ငါ့ဒုတ်ကြီး သူ့ အဖုတ်ထဲ ထည့်နေတာကို ကြည့်ကို ကြည့်ခိုင်းရမယ်လို့ တေးထားလိုက်၏၊ မိုးအောင်သူ မှာ အသား ညို သူဖြစ်ရာ သူ့ လိင်တန် ညိုညို ကြီး က ဖွေးဖြူ ဥ နေသော ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ်လေး ထဲ ဖြေးဖြေး ခြင်း တိုးဝင် သွားသည် မှာ ကြည့်ရတာနူင့် ပင် အရသာရှိသည်ဟု ထင်မိလေသည်။ မိုးအောင်သူ အဖို့ မှာ လပေါင်း များစွာ စိတ်ကူးနူင့် မှန်းခဲ့ ရပြီး ဒီတသက်တော့ ဖြစ်နိူင်ခြေ မရှိ ဟု ထင်ထားခဲ့ ရသော သူ့ ဘောစိ မမ ကို လုပ်နေရ ခြင်း ဆိုသည့် အတွေးက ပင်လျှင် သုတ်ရည်များ ချက်ခြင်း ပန်းထွက် သွားရလှအောင် စိတ်လှုပ်ရှား မိနေပေသည်၊ ထို့ အတွက် ကြောင့်လည်း တလက်မ ဆို တလက်မ တအိအိ တိုးဝင် သွားသော သူ့ လိင်တန် မှ ခံစားရသည့် အရသာ ကို အပြည့် အ၀ ခံစားနေလေတော့သည်။ တချီပြီး သွား ခဲ့ သည့် ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ် တွင်း မှ အရည် များကြောင့် မိုးအောင်သူ၏ လိင်ချောင်းကြီး မှာ အခက် အခဲ မရှိ တိုးဝင် သွားသော်လည်း ၊ ခလေး လည်း မမွေး ဘူး၊ လင် နဲ့ လည်း ဝေး နေတာ ကြာ၊ နေပြီ ဖြစ်သော ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ သူ့ အဖုတ်တွင်း တင်းတင်း ကျပ်ကျပ် ပြည့်နှက် သွားသည်ဟု ခံစားနေရလေသည်။
မိုးအောင်သူ လိင်ချောင်းကြီး သူ့ အဖုတ်ထဲ စေးစေးပိုင်ပိုင် တိုးဝင်လာတော့ သူ့ ဘိုက်မှာ နစ် နေအောင် အရသာ ရှိလှပြီး ၊ မိုးအောင်သူ လိင်ချောင်းကြီး သူ့ အဖုတ်ထဲ မှ ဆွဲ ထုတ်လိုက် ချိန် ရင်ထဲ မှာ ဟာကနဲ ဖြစ် သွားရ၏၊ မိုးအောင်သူက သူ့ ပေါင် နူစ်လုံးကို ပုခုံးပေါ်ထမ်း တင်ပြီး အားရ ပါးရ ဆောင့်သည့် အချိန်မှာတော့ သူ့ အဖုတ် အတွင်းသား နံရံ များမှာ မိုးအောင်သူ ဒစ်ကြီး ပွတ်သတ်မှု ကြောင့် ကာမ ဆိပ် ဒီရေလို တက်လာပြီး သူ့ဖင်ကြီး ကို ပါ ကြွကြွ ကော့ပေးနေမိတော့သည်။ မိုးအောင်သူ ကလည်း လူငယ် ပီပီ ဖန်းကနဲ ဖန်းကနဲ နေအောင် ပစ်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဒေါ်ဝင်းပပ ခမျာ အင့် ကနဲ အင်းကနဲ နေအောင် ခံစားနေရလေသည်၊ အခုတော့ ဒေါ်ဝင်းပပ တယောက် မျက်စေ့ကို စုံမှိတ်လျှက် သူ့လက်နူစ်ဘက်က အိပ်ယာခင်းကို ဆုပ်ဆွဲ ကာ မိုးအောင်သူ ၏ အလိုး အဆောင့်ကို အံကြိတ်ခံစားနေလေသည်၊ မိုးအောင်သူကလည်း သူ့ လီးကြီး ကို ဒစ်ပေါ်ခါနီး ထိ ဆွဲ ထုတ်ထုတ်ပြီး မှ အားရ ပါးရ ဖင်ကော့ ကာ ဆောင့်ဆောင့်ချသဖြင့် ဒေါ်ဝင်းပပ အိပ်ခန်းထဲ တွင် တဖန်းဖန်း တပြွတ်ပြွတ် အသံ များဖြင့် ညံစီ နေပေတော့သည်၊ မိုးအောင်သူမှာ မကြာခင် ပြီးတော့မယ် ဆိုတာ သိသော်လည်း ဒေါ်ဝင်းပပ ကို သူနူင့် ပိုပွင့်လင်း စေလိုသဖြင့် ဆောင့်လိုးနေရာ မှ ခနနားလိုက်ပြီး ဒေါ်ဝင်းပပ မျက်နှာလေး ကို ငုံနမ်းလိုက်ကာ၊မမ၀င်း..ပြီးတော့ မလား ကျနော်တို့ ပြိုင်တူပြီးကြရအောင်လေ ဟုကပ်ပြောလိုက်ရာ၊ မျက်စေ့လေး မှိတ်ကာ ကြိတ်ခံနေရှာသော ဒေါ်ဝင်းပပ က မျက်လုံး မဖွင့် ပဲ ခေါင်းလေး ငြိမ့် ပြီး ဟုသာ ဆိုလေသည်။ မိုးအောင်သူ က အားမလို အားမရ ဖြင့် ဒေါ်ဝင်းပပ နူတ်ခမ်း အစုံ ကို ဆွဲ ငုံ စုပ်ပစ်လိုက် လေရာ ဒေါ်ဝင်းပပ ခမျာ အဖုတ်ထဲ မှာလည်း ဆန့်တငန့်ငန့် နူင့် အရှိန်တက် နေတုန်း မို့ မိုးအောင်သူ လည်ကုတ် ကို သူ့ လက်များဖြင့် ဆွဲယူသိုင်း ဖက်ပြီး ပြင်းပြသော ရမက် အနမ်းများဖြင့် တုန့်ပြန်လာ တော့သည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ ပေါင်တန် နူစ်ချောင်းကလည်း မိုးအောင်သူ ခါးကို ညှပ်ကာ သူ့ခြေကျင်းဝတ်ခြင်းခြင်း မိုးအောင်သူ ဖင်အနောက်ဖက်ကို ချိတ်လျှက် သူ့ အဖုတ်ဆီ မိုးအောင်သူ လိင်ချောင်းကြီး အဆုံးထိဝင်နိူင်အောင် ဆွဲ ယူ နေလေတော့သည်။ မိုးအောင်သူ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မအောင့် နိူင်တော့ပဲ အပြီး သတ်ခါနိး တိုက်သည့် မုန်တိုင်း လို တဖုန်းဖုန်း ပစ်ဆောင့်နေမိတော့သည်။ ..ဖွတ်..ဖတ်..ဖွတ်..ဖတ်.. ….ဗြွတ်..ဗျိ..စွတ်..ဖတ် ….အားအား အိ..အိ ဒေါ်ဝင်းပပ ကိုယ်လုံးတခုလုံးလည်း တောင့်တင်း တုန်ခါ သွားပြီး မိုးအောင်သူ ကို တင်းတင်းကြီး ဖက်ထားလိုက်သလို၊ ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ်အတွင်း နံရံများက လည်း လှုပ်စိလှုပ်စိ ဖြင့် မိုးအောင်သူ လိင်ချောင်း တချောင်း လုံးကို ဖျစ်ညှစ် ပေးသလို ဖြစ်နေတော့ ၊ မိုးအောင်သူ လိင်တန်ကြီး မှာ မခံနိူင်တော့ပဲ ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲ သုတ်ရည်များ ဒေါ်ဝင်းပပ စောက်ခေါင်း အတွင်းသို့ ပန်းထည့် ပစ် နေမိလေတော့သည်။
ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ သူ့ အဖုတ်ထဲ သုတ်ရည်ပူပူ နွေးနွေး များပန်းထုတ်လိုက်ပြီး တဖြးဖြေး ပျော့ သွားသော မိုးအောင်သူ လီး ကြီးကြောင့် အဖုတ် အတွင်း မှ အရည်များ စီး ထွက်လာရာ အိပ်ယာပေါ်ကျ ပြီး ကွက်ကုန် မှာ စိုး၍ ထမိန်ကို လုံးထွေး ကာ အဖုတ် ပေါ် အုပ်လျှက် ရေချိုးခန်းဆီသို့ ပြေးထွက်ခဲ့လေသည်။ မိုးအောင်သူ မှာ ရေချိုးခန်း ထဲ ပြေးဝင်သွားသော ဒေါ်ဝင်းပပ နောက်ပိုင်း အလှ ကို ကြည့် ရင်း ရင်တွင်း မှာ ပီတိ တမျိုး ခံစားလိုက် ရလေသည်၊ အရင်က ထမိန်ဝတ်ထား သော ဤ ဖင်လုံးကြီး များ ကို ကြည့်လျှက် အံကြိတ် ခဲ့ ရသူ၊ အခုတော့ ဖင်ပြောင်ပြောင် ကို မြင်နေရခြေပြီ၊ တချီ တောင် လိုးပြီး သွားပြီ ဆိုတော့ နောင် အလားအလာ များက လည်း ကောင်းမည့် သဘောရှိနေသဖြင့်၊ မိုးအောင်သူ တယောက် သူ့ ကံ ကို ပင် သူ မယုံနိူင်အောင် ဖြစ်ရသည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ ရူးပေါက် ပြီး သူ့ အဖုတ်လေးကို ဆပ်ပြာ သုံး ရေဆေး သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်သည်၊ ထမိန် ကတော့ အရည်တွေ ပေ နေပြီမို့ အ၀တ်လျှော်မည့် ခြင်းထဲ ပစ်ထည့် လိုက်သည်၊ နောက်တော့ အမွေးပွ တဘက်တထည် ဘေစင်အောက် ဘီရိုလေး မှ ထုတ်ကာ ခါးအောက်ပိုင်း ကို ပတ်လိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ မှထွက်လာခဲ့လေသည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ ထွက်လာတာမြင် ၍မိုးအောင်သူ ကရေချိုးခန်းထဲ ၀င် ပြီး သူ့ ကောင်ကြီး ကိုလည်း ဆပ်ပြာမွှေးဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်လိုက်သည်။ မိုးအောင်သူ ရေချိုးခန်း ထဲ မှ အိပ်ခန်း အတွင်း သို့ ပြန်ဝင်လာတော့၊ အ၀တ် ဘီဒိုရှေ့ မှာ ၀တ်စရာ တခုခု ရှာနေသော ဒေါ်ဝင်းပပ ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ အပေါ်ပိုင်း မှာ အင်းကျီချွတ်ထားပြီး အသားရောင် ဘရာဇီယာ ပျော့လေး ကို ၀တ်ထားပြီး အောက်ပိုင်း မှာတော့ အမွှေးပွ သဘက်ကြီး ကို ပတ်ထား၏၊ မိုးအောင်သူ ထွက်လာတာ တွေ့လို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့၊ မိုးအောင်သူ မှာ ပုဆိုး မ၀တ်ရသေးသဖြင့် လောလော လတ်လတ် ရေ ဆေး ထားသော မိုးအောင်သူ ၏ လိင်ချောင်းကြီး မှာ မပျော့ မ မာဖြစ်နေသ ဖြင့် လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း နာရီ ချိန်သီး ကဲ့သို့ ရမ်းရမ်း ရမ်းရမ်း ဖြစ်နေသည် ကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။လုံချည် ၀တ်တော့ တခါထဲ အရှက် ကို မရှိဘူးဟီး..အမ၀င်း ကလည်း ဘယ်သူရှိ တာမှတ်လိုကျနော်တို့ ချည်းပဲ ဟာကို.. အေးလေ ငါရှိနေလို့ ပေါ့ မျက်စေ့ထဲ မှာ ကိုးယိုး ကားယားကြီး မိုးအောင်သူ က ပြုံးလိုက်ပြီး အ၀တ်ဘီဒိုရှေ့ ရပ်နေသော ဒေါ်ဝင်းပပ နောက်သွားရပ်လိုက်သည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ တို့ အ၀တ်ဘီဒို မျာ ခေတ်မှီ လှသော ကလော့ဆက် ဖြစ်ပြီး တံခါးမှာ ဘေးတိုက် ရှောတွန်းပိတ်ရသော မှန်တံခါး ဖြစ်လေသည်၊ မိုးအောင်သူ က ဒေါ်ဝင်းပပ အနောက် မှာ ကပ်ရပ်ပြီး ဘီဒိုတံခါးကို ကြည့်လိုက်တော့ မှန်သားပြင်ပေါ်မှာ သူတို့ နူစ်ယောက် မျက်လုံးချင်း ဆုံမိကြလေသည်၊ မိုးအောင်သူ က မှန်သားပေါ်မှာ မြင်နေရသည့် ဒေါ်ဝင်းပပ ၏ အသားရောင်ဖျော့ဖျော့ ဘရာဇီယာက အောက်က လျှံထွက်တော့ မလို မို့မေါက် ထွားဖွံ့ လှသည့် ရင်သားအစုံ ကို အနောက်ဘက်မှ သိုင်းဘက် ကာ သူ့ လက်ဝါး နူစ်ဘက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်လိုက်မိသည်။ဟး.. ဒေါ်ဝင်းပပ က မျက်ခုံးလေး ပင့်ပြီး ပြုံးစေ့စေ့ ဖြင့် တချက်လှမ်းတား သလို အသံပေးရင်း မိုးအောင်သူ့ လက်ကောက်ဝတ်နူစ်ဘက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်၊ သို့ သော်လည်း မိုးအောင်သူ ၏ လက်ဝါး နူစ်ဘက်ကတော့ အားရ ပါးရ ဆုပ်နှယ်နေပြီ ဖြစ်ရာ ဒေါ်ဝင်းပပ ပါးစပ် မှ ငြီးသံလေး တချက်ထွက်လာ ခဲ့သည်၊ ဖြေချထားသဖြင့် ဒေါ်ဝင်းပပ ခါးလည်ခန့် ရောက်နေသည့် နက်မှောင်ထူထဲ သော ဆံပင်အုပ်ကို မိုးအောင်သူ က သူ့မေးဖြင့် အသာ ဖယ်ပြီး ဒေါ်ဝင်းပပ လည်တိုင်လေး ကို ငုံနမ်းလိုက်သည်၊ သူ့ဖ၀ါး အောက်မှာလည်း မာတောင်ထလာသော ဒေါ်ဝင်းပပ နိူ့သီးခေါင်း နူစ်လုံး ပို သတိထား မိလိုက် သည်နူင့် သူ့လိင်တန်ကြီး ကလည်း တဖြည်းဖြည်း မာတင်း လာခဲ့ ပြန်ပါလေသည်၊ မှန်ထဲ မှာ ဒေါ်ဝင်းပပ မျက်လုံးလေး စင်းနေတာ တွေ့ရတော့ မိုးအောင်သူက ဒေါ်ဝင်းပပ ဘရာဇီယာကို ဂျိတ်ဖြုတ် ပြီး ပုခုံးနူစ်ဘက်မှ ကြိုးပါဖြုတ် ပြီး ကြမ်းပေါ် ပစ်ချလိုက်သည်၊ အိုး လှလိုက်တာ နည်းတဲ့ နိူ့ကြီးတွေ မဟုတ်ဘူး၊ ဟု မိုးအောင်သူ စိတ်ထဲ မှာဖြစ်သွားရသည်၊ အခုမှ လွတ်လွတ် လပ်လပ် နိူ့ကြီး နူစ်လုံးကို အားရပါးရ ဆုပ်နှယ်ရင်း မာတောင်နေသော နိူ့သီးခေါင်း လေး များကို လက်ဖျားလေး များဖြင့် ကျစ်လိမ့်လိုက်တော့ ၊ ဒေါ်ဝင်းပပ ကြောင်မလေး ငြီးသံ မျိုး ငြီးလာပြီး သူ့ ခေါင်းကို လည်ပြန်လှည့်ကာ မိုးအောင်သူ နူတ်ခမ်းများ ကို အငမ်းမရ ပြန်နမ်းလာခဲ့သည်၊ မိုးအောင်သူ က သူ့လက်တဘက်ဖြင့် ဒေါ်ဝင်းပပ ခါးမှာပတ်ထားသည့် သဘက်ကို ဖြေချလိုက်သည်၊ လုံးဝန်း စွံကား ဖေါင်းအိလှသည့် ဒေါ်ဝင်းပပ ဖင်လုံးကြီး နူစ်ခု ၏ အထိအတွေ့က က အေးစက် အိတင်းနေသဖြင့် သူ့ လိင်တန်ကြီး မှာ အရမ်း ကို မာတင်း လာခဲ့ရသည်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ အဖို့ မှာလည်း ပူနွေးမာတောင်နေသည့် မိုးအောင်သူ ၏ လိင်ချောင်းကြီး သူ့ဖင်ကြားမှာ တိုးဝင်လာခဲ့သဖြင့် အိုကနဲ ပင် ဖြစ်သွားရပြီး သူ့ အဖုတ်တွင်း မှ အခုန ကထဲက စိုထိုင်းထိုင်း စဖြစ်နေရာက အခုတော့ အရည်လေးပင် စီးကျ ချင်လာခဲ့ရလေတော့သည်။ မိုးအောင်သူ က သူ့ကျောပြင်လေး ကိုတွန်းလိုက်တော့ အတွေ့ အကြုံ ရှိသော ဒေါ်ဝင်းပပ က သူ့ ဘီဒို မှန်တံခါးကို သူ့လက်နူစ်ဘက်ဖြင့် လှမ်းထောက် ပြီး သူ့ ဖင်ကြီး ကို ကော့ပေးလိုက်လေသည်၊ မိုးအောင်သူက လည်း ဒေါ်ဝင်းပပ ၏ ကားစွင့်နေသော ဖင်ကြီး နူစ်လုံးကြား အောက်မှ ဖေါင်းမို့မို့ စောက်ဖုတ်ကြီး အ၀ ကို သူ့ လိင်ချောင်းကြီး ကို တေ့ ကာ ဖိသွင်းလိုက်လေသည်။ အား..ကျွတ်စ်..ကျွတ်စ်.. ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ်ကြီးထဲ မိုးအောင်သူ လိင်ချောင်းကြီး ဆွိ ကနဲ ၀င်သွားတော့ ဒေါ်ဝင်းပပ ဆီ မှ ငြီးသံလေး ထွက်လာခဲ့သည်၊ နာလို့ မဟုတ် အရသာရှိလှလွန်းလို့ပဲ ဖြစ်သည်၊ ငတ်နေတာ ကြာပြီမို့လား၊ မိုးအောင်သူ က ဒေါ်ဝင်းပပ ခါးကျင်ကျင်လေး ကိုကိုင်ကာ တချက်ချင်း အားပါပါဖြင့် ဆောင့်လေတော့သည်၊ သူ ကော့ဆောင့်လိုက်တိုင်း ရမ်းခါနေသော နိူ့ကြီး များကို သူတို့ ရှေ့ မှန်သားပြင်ပေါ် မှာ တွေ့နေရလေရာ၊ သူ့အတွက်တော့ ဗီဒီယို လည်းကြည့် ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ရသည့် အရသာ တွေ့နေရလေတော့သည်၊ ..စွီဖတ်..ဖတ်..ဖွတ်.ဖတ်ဖတ် ..အား.မိုးအောင်သူ ဒီနေ့ အလုပ် ကို အစောကြီး ရောက် နေသည်၊ အရင် အပတ်က သူ့ ဘောစိ ဒေါ်ဝင်းပပ နူင့် ရမက်နယ် လွန် ကျွံ သွားခဲ့ ရပြီး ၊ ဒါ ပထမ ဆုံး အကြိမ် ပြန်တွေ့ ရမှာမို့ အရမ်း ပျော်နေသည်။
သူ့ ကောင်ကြီး ကလည်း အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ အောက် မှာ အတင်းတိုးထောင်ထ နေသဖြင့် ကျပ် ပြီး နေလို့ထိုင်လို့ မကောင်းဖြစ်နေရသည်၊ ဟောလာပါပြီ မမ၀င်း၊ လှလိုက်တာ မမ၀င်းရယ် လို့ မိုးအောင်သူ စိတ်ထဲ ရေရွတ်မိလေသည်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ လို့သာ ခေါ်နေကြတာ ၀င်းပပ က အသက် ၃၀ သာ ရှိသေးသည်၊ အလုပ်ထဲ မှာ လူကြီး ပုံပေါက် အောင် ဒီဂရီ သိပ်မရှိသော လိပ်ခွံကိုင်း မျက်မှန်တလက် ကို တတ်ထားရာ မိုးအောင်သူ မျက်စေ့ထဲ မှာတော့ မျက်မှန်ကြော်ငြာတွေထဲ က မော်ဒယ် နဲ့ တောင် တူသေးတယ် လို့ တွေးမိသည်၊ ရုံးခန်း ထဲ ၀င်လာတော့ နူတ်ဆက်ကြတဲ့ သူတွေ ကို စကားပြောရင်း သူ့ အခန်းရှိရာ သူလျှောက်လာရင်း လမ်းမှာ မိုးအောင်သူ နဲ့ မျက်လုံးချင်း ဆိုင်မိ ပြီး မျက်နှာလေး ရဲ ကနဲ ဖြစ်သွား၏၊ ..ဂွတ်မောနင်း အမ၀င်း.. အေးအေး ဂွတ်မောနင်း မောင် ဟု ဆို ပြီး သုတ်သုတ် သုတ်သုတ် နူင့် သူ့ အခန်းထဲ ၀င်သွားတော့သည်။ ၀င်းပပ ပေါင်ခွဆုံ မှာတော့ စိုတိုတို ဖြစ်လာခဲ့သည်၊ တကယ်တော့ တနင်္ဂနွေ တရက်လုံး အိမ်မှာ တယောက်ထဲ နေရင်း အိမ်မှာ ဟိုနေ့ က မိုးအောင်သူနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာ ပြန်စဉ်းစားရင်း သူ့ အဖုတ်လေး သူ ပွတ်နေခဲ့ မိသည်၊ ကိုတင်ထွတ် ဆီ ဖုန်းဆက်တော့ ကိုတင်ထွတ်တို့ ဆီ မေမေ ရောက်နေသည်၊ မေမေ က သူတို့ မြို့ မှာ နေရတာ ပျင်းလို့ တဲ့ ဖေဖေ့ ကို ထားခဲ့ ပြီး ကိုတင်ထွတ် ရှိရာမြို့ လာလည် နေသည်တဲ့၊ နေကောင်းလား ဘာညာမေးပြီး ဖုန်းချလိုက်သည်၊ ၀င်းပပ အဖုတ်လေး ကတော့ ရွစိရွစိ နဲ့၊ အရှိန်ရ နေပြီလေ၊ ဟိုနေ့ က မိုးအောင်သူ ၃ ချီ ဆွဲ လိုက်တာ ၀င်းပပ တောင် တော်တော်လေး နူံးသွားသည်၊ ဒါတောင် ကိုယ်တော်ချော က နှပ်ပြီး နောက်တချီ လုပ်ဖို့ ကြံနေသေးသည်၊ အိမ်က လူတွေ ရိပ်မိကုန်မှာ စိုးလို့ နှင်လွတ်လိုက်ရသည်၊ လူပျို လူငယ် ဆိုတော့ တချိန်လုံး မာနေသလား မသိ၊ ၀င်းပပ တောင် တော်ပါပြီ ဖြစ်သွားရသည်၊ သို့သော်လည်း မိုးအောင်သူ ပြန်သွားပြီး ခနနေတော့ သူ့ အဖုတ် က ပြန် တောင်းဆိုလာပြန်သည်၊ နောက်နေ့ စနေ အလုပ်မသွားတော့ အိမ်မှာပဲ နားလိုက်သည်၊ သူ့ အလုပ်က တော့ နေ့တ၀က် ဖွင့်သဖြင့် မိုးအောင်သူ ရောက်နေမယ် ဆိုတာ သိသည်၊ ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ မှန်းမသိ ရင်မဆိုင်ချင် သေးတာရယ်၊ သူ့အတွက် အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ဆိုတဲ့ ဆက်ဆံရေး ကို ဘယ်လို ဆက်ထိန်း ရ မလဲ ဆိုတာ လည်း မစဉ်းစားတတ် ဘူး ဖြစ်နေတာရယ် ပါသည်၊ ၀င်းပပ မှာ ဒါမျိုး အတွေ့ အကြုံလည်း မရှိ၊ တခါမှ လည်း မဖေါက်ပြန်ဖူး၊ ကိုယ့် ယောက်ကျား ကလွဲရင်၊ ဒါ ပထမဆုံး တစိမ်း ယောက်ကျား တယောက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံ ဖူးတာ ပဲ၊ အင်းလေ ကိုယ့်ဘာသာ ခတ်တည်တည် နေရင် ကောင်လေး မစ ရဲ လောက်ပါဘူးလို့တွေးရင် သူ့ စားပွဲ ပေါ်က စာရွက်စာတမ်းတွေ လှန်လှောရင်း အလုပ်ထဲ စိတ်မြုပ် ဖို့ ကြိုးစားနေ လိုက်သည်။ …အမ၀င်း..ဒီမှာ အမ၀င်းအတွက် ကော်ဖီ.. ခေါင်းငုံ့ အလုပ်လုပ်နေသော ၀င်းပပ တယောက် မိုးအောင်သူ အသံကြားတော့ မော့ကြည့်မိသည်၊ ဆံပင်ရှည်ရှည်၊ ဂုတ်ထောက်နူင့် မျက်နှာနုနု မိုးအောင်သူ ကို တွေ့လိုက်ရတော့ ရင်ထဲ လှပ်ကနဲ ဖြစ် သွားသည်၊ ဒီနူတ်ခမ်း တွေ ပဲ ဟိုနေ့ က သူ့ နိူ့သီးခေါင်း တွေ ကို အငမ်းမရ စို့ ခဲ့တာ၊ သူ့ အဖုတ် ကိုလည်း ယုယုယယ နမ်းရူံ့ရက်ပေးခဲ့တာ ၊ ၀င်းပပ မျက်နှာ ပန်းရောင် တချက် ဖြန်းသွားသည်၊ …အေးအေး ကျေးဇူးပါကွယ် မောင်မိုး… ၀င်းပပ က သူ့အလုပ်စားပွဲ ကြီးကိုပတ်ကာ သူ့ သားရေကုလားထိုင် ဘေးနားလာရပ်ပြီး ကော်ဖီခွက်ကို စားပေါ်ပေါ်လာချ ပေးသော မိုးအောင်သူ ကို တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်၏၊ သူ့လည်ချောင်း မှာ နည်းနည်း ကပ်သလို ဖြစ်သွားသဖြင့် လည်း ဟင်းဟင်း ဆိုပြီး လည်ချောင်းတချက် ရှင်းလိုက်မိသည်။
မိုအောင်သူက ဒေါ်ဝင်းပပ ရှေ့မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် လိုက်သည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ ခြေထောက်တဖက်ကို မ ပြီး ဘေးနားက ကုလားထိုင်ပေါ်တင်လိုက်ကာ ကားသွားသော ဒေါ်ဝင်းပပ ပေါင်ခွဆုံ ကြား သူ့မျက်နာကို အပ် လိုက်တော့သည်။ မိုးအောင်သူ ၏ လျှာကြီး သှူုအဖုတ်နူတ်ခမ်း ကို စိုစိုစွတ်စွတ်နဲ့ နွေးကနဲလာ ထိတော့ ဒေါ်ဝင်းပပ တကိုယ်လုံး နွေး ကနဲဖြစ် သွားပြီး အကြောတွေတောင်တောင့်သလို ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လဲပြိုမသွားအောင် မိုးအောင်သူ ဆံပင်ကို ဆွဲဆုပ်ကာ ကိုင်ထိန်းထား လိုက်မိပြီး မျက်လုံးကို လည်းတင်းတင်း ကြီး ပိတ်ထားမိ လေတော့သည်။ မိုးအောင်သူ ကတော့ သူ သွားရည် တမြှားမြှား ကျခဲ့ ရသော ၀င်းပပ ဖင်လုံးကြီး များ ကို လက်ဝါး နူစ်ဖက်က ဆုပ်နှယ်ပြီး သူ့ လျှာကြီး က ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ် ဖေါင်းဖေါင်း ကြီး ကို အားရ ပါးရ တပြတ်ပြတ် ကုန်းရက်နေမိလေတော့သည်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ မှာလည်း မိုးအောင်သူ ဘာဂျာ အပေးကောင်းမှုကြောင့် မကြာခင်ပဲ တွန့်တက်ကာ ကာမ အရသာ အထွတ်အထိပ် သို့ ရောက်သွားရလေသည်၊ ၀င်းပပ က မိုးအောင်သူ ကို အသာ ဆွဲထူရင်း မောင်မိုး ဒီထဲ မှာ တို့ သိပ်ကြာလို့ မရဘူး နော်ဟုတ်..အမ၀င်း..ဟို စားပွဲ ကို လက်ထောက်ပြီး ကုန်းပေးမလား ကျနော် အနောက်က လုပ်လိုက်မယ် နော်.. ဒေါ်ဝင်းပပ စကား ဆက်မရှည်တော့ပါ၊ မိုးအောင်သူ ကို ကျောပေးပြီး စားပွဲခုံစွန်းလေး ကို လက်နူစ်ဘက်ဖြင့် ထောက်ကိုင်ကာ သူ့ ဖင် ကြီးကို အနောက်ဖက် ကော့ပေးလိုက်လေသည်၊ သေးကျင်သော ခါးလေး အောက်မှ စွံကားတက်လာပြီး လုံးကျစ် ၀ိုင်းစက်နေသော ဖင်ဖွေးဖွေးကြီး က မိုးအောင်သူ့ မာနေသော လိင်ချောင်း ကြီး ကို မထိန်းနိူင်လောက်အောင်တဆတ်ဆတ် တုန်လာစေခဲ့သဖြင့် အချိန်မဆိုင်းတော့ ပဲ ၀င်းပပ အနောက် မှာ နေရာယူ၊ ၀င်းပပ ပေါင်နူစ်လုံးကြားမှ အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်း အ၀ မှ တေ့ကာ ဖိသွင်း လိုက်လေတော့သည်။ စွိစွတ်..အားအင် နူစ်ယောက်စလုံး က အသံ ကျယ်ကျယ် မထွက်ရဲ ကြသော်လည်း ကာမစည်းဇိမ် အရသာ ကောင်းလှသောကြောင့် တိုးတိုး လေး ညှီး ညူရင်း တက်ညီလက်ညီ လိုးနေကြရာ၊ အခန်းလေး တွင်းထဲ အရည်ရွမ်းနေသော အဖုတ်ကြီးထဲ လိင်ချောင်းကြီး ၀င်ထွက်နေသံ၊ မိုးအောင်သူ ပေါင်ခြံနူင့် ဒေါ်ဝင်းပပ ဖင်လုံးကြီး များ ရိုက်ခတ်မိသံ တဖတ်ဖတ် တို့သာ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီး ပေါ်ထွက်လာနေလေတော့သည်။ ….အား ကောင်းလိုက်တာ အမ၀င်းရယ်..အမ အဖုတ်ကြီး က အီစိမ့်နေတာပဲ လိုးရတာ.. .အင်တို့ လည်း ကောင်းတာပါပဲ ကွယ် နောက်ဆုံး မိုးအောင်သူ က သူ့ လိင်ချောင်းကြီး ကို အဆုံးထိ ဖုန်းကနဲ ဆောင့်ချလိုက်ပြီး ဒေါ်ဝင်းပပ စောက်ခေါင်းထဲ သုတ်ရည်တွေ တထုတ်ထုတ် ပန်းထည့် ပစ်လိုက်တော့သည်။ ၀င်းပပ ရုံးရောက် ချလာတော့ မိုးအောင်သူ အံသြသွားသည်၊ မနေ့က ပြောတော့ ဒီနေ့ ကိုတင်ထွတ်ကို သွားကြိုရမှာ မို့ မလာတော့ဘူးတဲ့၊ အခု တော့ ရုံး ထဲ ရောက်ချလာ လိုက်တာ အပါး လှလှခြေလား၊ ဒီနေ့ အပြာရောင် မင်းသမီးလေး ပါလား၊ အပေါ်က မိုးပြာရောင် ဗြောင် ကို လက်ပြတ်မကျ လက်စကလောက်လည်း မရှည် ခေတ်ဟောင်းတုန်းက စတိုင်မျိုးကို ခေတ်ဆန်ဆန်ပြန် ပြင်ထားတဲ့ ရင်စိ၊ ကော်လာထောင်လေးနဲ့ ခါးတို အောက်က ထမိန်အထက်ဆင် ဖုံးရုံလေး၊ အောက်ကတော့ အပြာခံမှာ ကန်လန့်ဖြတ် လှိုင်းတွန့် အလုံးကြီးတွေ ပုံစံ အချိတ် ထမိန် နဲ့ အဲဒီ လှိုင်းကြီး က ဒူးဆစ် လောက်မှာပဲ ပတ်တယ် ရှမ်းထမိန်တွေ လိုမျိုး၊ ဆိုတော့ တင်သားနေရာ မှာက အပြာဗြောင်လေး ပဲ၊ ဖြစ်နေတယ်၊ ခါးမှာတင်းတင်းလေး ပတ်ဝတ်ထားတဲ့ ထမိန် ကြောင့် စွင့်ကား လုံးကျစ်နေတဲ့ တင်သားတွေက ထင်းထင်းကြီးဖြစ်နေ တယ်၊ မိုးအောင်သူ မနေ့က တနေ့ လုံး စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ပြီးတာတောင် သူညီတော်မောင်က ချက်ချင်းခေါင်းထောင်ထ လာတယ်။
အမ၀င်း ဒီနေ့ မလာတော့ဘူးမှတ်လို့..ဆရာ့ လေယာဉ်က ဘယ်အချိန်ဆိုက်မှာလဲန့လည်မှလေ အဲဒါကြောင့် အိမ်မှလည်း နေရမှာ ပျင်း..ဒီမှာလည်းလုပ်စရာလေး တွေ ရှိ လို့ ထွက်လာတာ.. ၀င်းပပ သူ့ အခန်းထဲ ၀င်သွားပြီး လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်နေတော့သည်၊ မိုးအောင်သူ မှာသာ ငေါင်တောင်တောင် ဖြစ် နေပြီး ၊ တကယ်လို့ ကိုတင်ထွတ် ပြန်ရောက်လာ လျှင် သူ ဘယ်လို နေရ ထိုင်ရ မလည်း ဆိုတာကို စဉ်းစား ဦးနှောက်စားနေလေသည်။ ဟး မောင်မိုး ဒီဖိုင် ထဲ မှာ လိုနေတဲ့ အင်ဗွိုက်တွေ ရှာပြီး ဖြည့်လိုက်အုန်း.. ရုတ်တရက် သူ့ စားပွဲရှေ့ရောက်လာပြီး ပြောလိုက်တဲ့ ဒေါ်ဝင်းပပ အသံကြောင့် မိုးအောင်သူ ရုတ်တရက် လန့်သွားပြီး အတွေးပျက်သွား၏၊ ရုတ်တရက် မျက်နှာပျက်သွားသော ၊ဆပ်ကနဲ တုန်သွားသော၊ မိုးအောင်သူ ကိုကြည့်ပြီး ဒေါ်ဝင်းပပ လည်း တမျိုးကြီး ခံစားလိုက်ရသည်၊ ..မောင်မိုး နေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါတယ် အမ၀င်း ..ဖိုင် တွေ ဆိုမှ ကျနော် တခု ပြစရာရှိသေးတယ် အဲဒါ အရေးကြီးမယ် ထင်တယ် ဟို ဖိုင်အခန်းထဲမှာ..ခနလောက် လိုက်ကြည့်ပါအုန်း.. မိုးအောင်သူက ပြောပြောဆိုဆို ထထွက်သွားလိုက်၏၊ ၀င်းပပ တယောက် ချီတုံချတုံ ဖြစ်ကျန်ခဲ့သည်၊ သူတို့ မိုးအောင်သူ သူငယ်ချင်း ဆီက ဘိ ရပြီးကတဲက ထိုဖိုင်ခန်းလေး ကို လုံးဝ မသွားကြတော့ အန္တာရယ် အလွန်များ ၍ ဖြစ်သည်၊ အခု တော့ မိုးအောင်သူ တခုခု ပြောခြင်လို့ထင်သည်၊ ဟု တွေးကာ ဒေါ်ဝင်းပပ လိုက်သွားလိုက်လေသည်၊ ၀င်းပပ အခန်းထဲ ၀င်လိုက်သည်နူင့် မိုးအောင်သူက အခန်းတံခါးကို ဂျက်ချလိုက်ပြီး ဒေါ်ဝင်းပပ ကို အတင်း ပွေ့ဖက်ကာ အသည်းအသန် နမ်းပစ်လိုက်သည်၊ ၀င်းပပ က အတင်းတွန်းထားပြီး၊ မိုးလေး..မနေ့ က ပဲ ကိုယ်တို့ သဘောတူချက်ရပြီးပြီလေ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ပါမယ် ဆိုတာ.. ..အင်းလေ အမ၀င်းရယ်..ကိုတင်ထွတ် လာရင် လို့ပြောထားတာလေ ကိုတင်ထွတ်မှ မရောက်သေးပဲဟာ.. မိုးလေးက ရစ်ပြီကွာ..ကိုယ် ဒီကနေ သွားကြိုမှာ အ၀တ်အစားတွေ ကြေလို့ မရဘူးလေ.. အင်းပါ အမ၀င်းရယ် အမ၀င်းက အရမ်းလှလွန်းတော့ ကျနော့်ကောင်ကြီးပေါက်ကွဲတော့မယ်ဗျ ဒီမှာကြည့်.. ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် မိုးအောင်သူ က သူ့လုံခြည်ကို ကွင်းလုံးပုံချွတ်လိုက်ပြီး အတွင်းခံကို ပေါင်လည်ဆွဲချလိုက်သည်၊ သူ့ ဖွားဘက်တော် လိင်တန်ကြီး က ထောင်ကနဲ ထွက်လာသည်၊ အကြောပြိုင်းပြိုင်း နှင့် ဖေါင်းကား တင်းမာနေသော လိင်ချောင်းကြီးက တလုံးထဲသော မျက်စေ့ဖြင့် ၀င်းပပ ကို ကြည့်နေ၏၊ ..ကဲ ဒါဆိုလဲ လာ မမ စုပ်ပေး မယ် မြန်မြန်လေး စိတ်လျှော့လိုက်နော် မထိန်းထားနဲ့ … ၀င်းပပ က ပြောပြော ဆိုဆို မိုးအောင်သူ ကို လိင်တန်ကြီး မှ ဆွဲ ဆုပ်ကိုင် ခေါ်သွားပြီး အခန်းထောင့်က စက္ကူ ပုံးပေါ်ထိုင်ချလိုက်သည်၊ မိုးအောင်သူ မတ်တပ်ရပ်လျှက် ၀င်းပပ အထိုင် ၊ မိုးအောင်သူ လိင်ချောင်းကြီးနဲ့ ၀င်းပပ ပါးစပ်ပေါက်နဲ့ က တည့်နေပေတော့ရာ၊ ၀င်းပပ က ထုံစံအတိုင်း ပုလွေ ပညာပြကာ မိုးအောင်သူ လီးကြီး ကို စစုပ်လေတော့သည်၊ လီးကြီး သူ့ပါးစပ်ထဲ ရောက်လာသည် နှင့် ဒေါ်ဝင်းပပ တယောက် အပြင်လောက ကို မေ့လေပြီ ၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဖီးတွေ တက်လာပြီး အားတက်သရော စုပ်သလို သူ့ အဖုတ်တွင်းကလည်း အရည်ကြည် စိမ့် ထွက်ကျလာပြီ၊ ဆယ်မိနစ်မျှ စုပ်ပေးသော်လည်း မိုးအောင်သူ တယောက် ပြီးမဲ့ ပုံမမြင်၊ ဘယ်ပြီးမလဲ မနေ့ က တနေကုန် တနေခန်း ဆော်ထားတာ ဆိုတော့ တချီပြီးဖို့ တော်တော်ကြာနေတာပေါ့၊ ဒေါ်ဝင်းပပ လည်း မထူးတော့ ဟု စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
မိုးအောင်သူ လီးကြီးကို သူ့ပါးစပ်မှ ပြွတ် ကနဲနေအောင် ဆွဲထုတ်ပြီး မတ်တတ်ရပ်လိုက်သည်၊ ..ကဲ မိုးလေး လာလာ ငါ့အ၀တ်အစားတွေ မကျေအောင်လုပ်နော် … ဒေါ်ဝင်းပပ သူ့ ထမိန်ကို ကွင်းလုံးချွတ်ပြီး ကုလားထိုင်နောက်မှီမှာ ခေါက်တင်လိုက်သည်၊ နောက် သူ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ခြေကျင်းဝတ်ထိ ဆွဲချကာ ခြေထောက်တဘက်ကို မထုတ်လိုက်သည်၊ နောက်တော့ စားပွဲခုံကို လက်နူစ်ဘက်ဖြင့်ထောက်ကိုင်ကာ ဖင်ကို နောက်သို့ ကော့ပေးလိုက်သည်၊ မိုးအောင်သူ တယောက် ကမန်းကတန်း ပင် ဒေါ်ဝင်းပပ အနောက်မှာ နေရာယူ ပြီး သူ့ လီးကြီးကို သူလက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ကာ ဒေါ်ဝင်းပပ ပေါင်နူစ်လုံးကြားမှ အနောက်သို့ ပြူနေဟန်ရှိသည့် နူစ်ခမ်းထူထူ အဖုတ်ကြီး အ၀တွင် တေ့လိုက်လေသည်၊ နောက်တော့ ဖြေးဖြေးချင်း ဇိမ်ခံသွင်း ရာမှ အရှိန်တက်လာတော့သည်၊ နောက်တော့လည်း ဒေါ်ဝင်းပပ ဖင်လုံးများနှင့် မိုးအောင်သူ ပေါင်ခြံတို့ တဖတ်ဖတ် ရိုက်သံ များနဲ့ အတူ အသက်ရူသံတွေလည်း မြန်လာကြသည်။ မကြာခင် အတွင်းမှာပင် တယောက်နှင့်တယောက် အထာသိနေကြပြီ ဖြစ်သော သူနှစ်ဦးတို့ ပြိုင်တူ ကာမ အရသာ အထွတ် အထိပ် သို့ ရောက်ရှိသွားကြလေတော့သည်။အချစ် ကြည့်စမ်း မတွေ့ရတာ ကြာ လို့ ပိုမိုက်လာတော့တာပဲအင်း ပါ တွေ့မှ ချွဲပြီ တခါထဲ အဝေး မှာတုန်းကတော့ ဖုန်းကို တပတ်တခါ အနိူင်နိူင် ဆက်ပြီးတော့.. ကိုတင်ထွတ်က ၀င်းပပ ကိုယ်လုံးလေး ကို ထွေးဖက်ပြီး နူတ်ခမ်းအစုံကို ဖမ်းစုပ်လိုက်သည်၊ မတွေ့ရတာ ကြာနေပြီ ဖြစ်သော မယားချော လေးမို့ ကိုတင်ထွတ် ပစ္စည်းကြီးက မာတာတာ ဖြစ်လာပြီး ၀င်းပပ ပေါင် ရှေ့ပိုင်း ကို သွားထောက်မိလေသည်၊ ၀င်းပပ စိတ်ထဲ ကိုယ့်ကို ကိုယ် မလုံ မလဲ တော့နည်းနည်း ဖြစ်သွားသည်၊ အခုန နာရီပိုင်းလေး က မှ မိမိ နူတ်ခမ်းတွေ က မိုးအောင်သူ လီးကြီး ကို စုပ်ခဲ့သေးသည်၊ ပြီးတော့ မိုးအောင်သူ က လည်း လိုးလိုက်သေးသည်၊ မိုးအောင်သူ က တော်တော် နဲ့ မပြီးနိူင်လို့ လေဆိပ် ထွက်ဖို့ အချိန်ကပ်သွားခဲ့ရသည်၊ ပလုပ်ကျင်းဖို့ အဖုတ်ဆေး ဖို့ အချိန်မရတော့၊ မိမိ အဖုတ်ကို တစ်ရူး ဖြင့် သုတ်ကာ သန့်စင်ခဲ့သော်လည်း မိုးအောင်သူ သုတ်ရည်တွေက အတွင်းထဲ မှာကျန်နေသေးသည်၊ သူ လေဆိပ်ကို ကမန်းကတန်းမောင်းလာတော့သူ့ အဖုတ်တွင်းက တစိမ့်စိမ့် ပြန်ထွက်လာသဖြင့် သူ့ ပင်တီ မှာ စိုစိုစွတ်စွတ် ဖြစ်နေရသေးသည်၊ လေဆိပ်ရောက်တော့လည်း သူအတွင်းဝင်လို့ ရအောင် လုပ်ပေးမည့် အဆက်အသွယ်ကို လိုက်ရှာရ နောက် လေယာဉ် ကလည်း ဆိုက်လာပြီ ဆိုတော့ အချိန်မရတော့ခြေ။
ကိုတင်ထွတ် နူင့် ၀င်းပပ အခန်းတွင်း ရောက်သည်နှင့် ကိုတင်ထွတ် က ကြမ်းတော့သည်၊ ၀င်းပပ လည်း လင်တော် မောင် ဆိုတော့ မငြင်းဖယ်နိူင်၊ ကိုတင်ထွတ် အကိုင် အတွယ် အပွတ်အသပ်များ ဖြင့် ဆန္ဒရမက် တွေ ပြန်လည် နိူးထ လာရသည်၊ ကိုတင်ထွတ် သူ့အတွင်းခံကို ဆွဲချွတ်တော့ မှ ၀င်းပပ သတိရသည်၊ ဒုက္ခ ပဲ ငါ ဆေးဖို့ မေ့သွားပြီ၊ သူများသိသွားမလား၊ ရင် ထဲ မှာ တထိတ်ထိတ် နှင့်၊အင်း အချစ် လည်း ကို့ ကို စောင့်နေရတာ ကြာနေပြီ ထင်တယ် ဟင်းဟင်း..အချစ် အရည် ဒီလောက်ရွဲ တာ တခါမှ တောင် မတွေ့ဘူးသလိုပဲ .. ….အို..ကိုကလည်း ကိုတင်ထွတ် က အားရ၀မ်းသာ စွာဖြင့် သူ့ လိင်ချောင်းကြီး ကို စွပ်ကနဲ ၀င်းပပ အဖုတ်ဝ တွင်တေ့ကာ စသွင်းကထဲက အားကုန် ဆောင့်လေတော့သည်၊ ၀င်းပပ မှာလည်း ပြီးခဲ့သည့် နာရီပိုင်းလေး ကမှ မိုးအောင်သူ လီးကြီး ၀င်ထွက်သွားခဲ့သော သူ့ အဖုတ်တွင်းသို့ ကိုတင်ထွတ်လီး ကြီး ၀င်ထွက်လာခဲ့ သည်မှာ စိတ်ထဲ တမျိုး ဖြစ်သော်လည်း သူ့ စိတ်တွေက ပိုမို တက်ကြွ သလို ဖြစ်နေခဲ့ရလေသည်၊ ထိုအတွက် ကြောင့်လည်း သူ့ကိုယ်တိုင်က ကိုတင်ထွတ် ကိုယ်ကြီး ကို တအားဖက်တွယ်လျှက် သူ့ ဖင်ကြီးကို ကော့ကာကော့ကာ အားရ ပါးရ တုန့်ပြန် နေမိလေတော့သည်၊ ကိုတင်ထွတ်မှာ ယောက္ခမ ကြီးထက်စာလျှင် ပိုမိုကျစ်လစ် ကာ နုပျို တောင့်တင်း သော ကိုယ်ခန္ဓာ ပိုင်ရှင် ဇနီးချောလေး ကို မလုပ်ရတာ ကြာပြီ မို့ စိတ်အရမ်း တက်ကြွနေရာ များ မကြာခင်မှာပင်၊ သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်ပြီး တချီပြီးသွားရလေသည်၊ ၀င်းပပ မှာလည်း သူ့ စောက်ခေါင်းတွင်းထဲ မှာ ယောက်ကျား နူစ်ယောက် ၏ သုတ်ရည်တွေ ရောနှော သွားပြီး သူ့ အဖုတ်တွင်းမှ ပင် လျှံကျလာကာ ဖင်ကြားသို့ စီးဝင်သွားတာ ခံစားသိနေရ လေရာ မကြုံစဖူး အတွေ့ အကြုံကြောင့် အကြောလေး တွေ တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ကာမ အရသာ အထွတ်အထိပ် ရောက်သွားရ လေတော့သည်။ဝင်းပပ တယောက် လည်း စိတ်ရှုတ်ထွေးနေရသည် ဘာမှန်း တော့ မသိ၊ ကိုတင်ထွတ် ပြန်ရောက် တော့ သူ့ငယ်ချစ် လည်း ဖြစ် လင်လည်း ဖြစ်သူ နူင့် အတူတူ ပြန်နေလိုက်ရ လျှင် မိမိ ဘ၀ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွား လိမ့်မည် ဟု ထင်ထားခဲ့သော်လည်း တကယ် တမ်းကြ တော့ ထင်သလို မဖြစ် နိူင်တော့မှန်း တဖြေးဖြေး ရိပ်မိလာခဲ့ ရသည်၊ ကိုတင်ထွတ် နူင့် သူ ခွဲနေရတာ ကြာ လို့ ညတိုင်း လိုလို အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်၊ သူ ကလည်း မိုးအောင်သူ နှင့် အတွေ့ အကြုံအသစ်များ ရလာခဲ့ သလို၊ ကိုတင်ထွတ် ကလည်း ဒေါ်ဒေါ်လှ ဆီ က အတွေ့အကြုံ များ ရခဲ့တာကို တော့ သူ သတိမထားမိ၊ ည ဘက် ကို တင်ထွတ် နဲ့ ကောင်းကောင်း အလိုးခံ ခဲ့ရပြီး အလုပ်ရောက် လာတော့ မိုးအောင်သူ နှင့် မျက်နှာချင်း ဆိုင် စေ့စေ့ မကြည့်ရဲ မျက်နှာပူ သလို ဖြစ် နေရသည်၊ မိုးအောင်သူ ၏ မျက်လုံး မျက်နှာထား တွေက ကြေကွဲ ဆွေးမြေ့နေ သလိုလို ၊ နှမြောနေ သလိုလို ဖြစ်နေသည်ဟု ဝင်းပပ စိတ်ထဲ မှာ ထင်နေ ခဲ့သည်၊ တကယ်က မိုးအောင်သူ နှင့် သူ က ကို တင်ထွတ် အပေါ် ဖေါက်ပြန် ခဲ့ သော်လည်း၊ အခု ဝင်းပပ စိတ်ထဲ မှာတော့ သူ မိုးအောင်သူ အပေါ်မှာ သစ္စာဖေါက်မိ နေသလို ခံစားနေရ၏၊ ဝင်းပပ နှင့် ကိုတင်ထွတ်က လည်း ရုံးကို အတူတူ လာနေကြတာမို့ မိုးအောင်သူ အတွက် က လည်း အနားကပ် ဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိူင်တော့ခြေ၊ ထို့ အပြင် မိုးအောင်သူ ကို လည်း အလုပ်မှာ စိတ်ချ အားကိုးရပြီမို့ ကိုတင်ထွတ် လုပ်ခဲ့သည့် မြို့ ကို လွတ် ဖို့ အစီအစဉ် ပင် လုပ်နေပြီ ဖြစ်လေသည်၊ မိုးအောင်သူ က လည်း ဒီအတိုင်း ရုံးမှာ စိတ်ဆင်းရဲ နေရမည့် အတူတူ စိတ်ပြေလက်ပျောက် နယ် ကို သွားတာက ပိုကောင်းမည် ဟုတွေးကာ အမြန် ဆုံးသွားနိူင်အောင် ပြင်ဆင်တော့သည်၊ မိုးအောင်သူ နယ် မသွားခင် အမ၀င်း နဲ့ တရက်လောက် အားရအောင် ချစ်ပါရစေ လို့ တောင်း ဆိုလာပြန်တော့ နဂိုလ်ထဲ က မှ စိတ်ယိုင်နေသည့် ဝင်းပပ တယောက် သူကြိုးစား ကြည့်မယ် လို့ ပြောလိုက်ရလေသည်။
မိုးအောင်သူ နယ်မသွားခင် တရက် ဝင်းပပ က သူ့ သူငယ်ချင်း တယောက်ကို အကူညီတောင်း ပြီး ကိုတင်ထွတ် ကို လိမ်ခိုင်းရလေသည်၊ သူတို့ ငယ်သူငယ်ချင်း တွေ မဆုံရတာ ကြာလို့ ဟု အကြောင်းပြ ပြီး မိုးအောင်သူ နှင့် သူ အချစ်စခန်း ဖွင့် လေ့ရှိသည့် ဘိ လေး ကို ရောက်လာခဲ့ရလေတော့သည်၊ မိုးအောင်သူ နှင့် ဝင်းပပ မှာ အခန်းထဲ ရောက်တာနှင့်၊ ခနတာ ဝေးနေကြရတာကို ပင် တနှစ်တာလောက် ထင်နေကြ သူများ ဖြစ်နေကြရာ မီးတောက်လုမတတ် အနမ်းတွေ ဖြင့် နမ်းစုပ် ပွေ့ဖက် မိကြလေသည်၊ ဝင်းပပ မှာ ကိုတင်ထွတ် နှင့် ညတိုင်း လုပ်ဖြစ်နေကြသဖြင့် မထောင်းသာသော်လည်း မိုးအောင်သူ တယောက်မှာ ကား နေ့တိုင်း သူလုပ်နေကျ ဘော့စ်မမ ကို ရုံးမှာ မြင်သာ မြင်ရ မကြင်ရ ဖြစ်နေရှာသည်မှာ ကြာပြီ ဖြစ်ရာ မအောင့်အီးထားနိူင်တော့၊ ထမိန် အတင်း ဆွဲချွတ်ကာ ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေး ပေါင်နှစ်လုံးကို ဖြဲကာ အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်း ကို ကုန်းရက် တော့သည်၊ နောက်တော့လည်း လူပျို ရိုင်း ပီပီ အားအင် အပြည့်နှင့်၊ တန်အောင် ဆိုပြီး ထပ်သောက်လာခဲ့တဲ့ အားဆေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ ဝင်းပပ တယောက် ကိုတင်ထွတ် တလလောက် လိုးသလောက် ကို ခံရလေသည်၊ နောက် ဆုံး အနေနှင့် သူတောင်းဆိုထားသော ဝင်းပပ ၏ ဖင်ပေါက် လေးကို ပါ ခွင့်ပြုချက်ရ သဖြင့် ခရေပန်းဦး ဆွတ်ခူးလိုက်ရလေ သည်၊ ခရေပန်းကို တော့ သူ သေခြာ လေ့လာထားသလို အရမ်း မလုပ်ပါ၊ အသင့်ယူလာသော ကေ၀ိုင် ဂျယ် နှင့် အပေါက် သေခြာ ချောဆီလက်နှင့် ထိုးပေး၊ ပြီး အဆင်ပြေလာမှ ကွန်ဒန် စွတ်ထားသော သူ့ လီး ကြီး ကို ဖြေးဖြေးချင်း ထည့် လေသည်၊ ဝင်းပပ ၏ လှပ အချိုးပြေပစ်လှသော ဂစ်တာရှိတ် ကိုယ်လုံး ကြောင့် စွံကားနေသည့် တင်သား လုံးကြီး တွေကို လက် ၀ါး နှစ်ဖက်ဖြင့် တဘက်တချက် ဆုပ်နှယ်ကာ စက်ဝိုင်းပုံ လိမ့်ပေးနေရင်းက ဝင်းပပ ခရေပွင့်လေးထဲ သူ့လိင်ချောင်း ကြီး တဖြေးဖြေး ၀င်သွားတာ ကြည့်ရတာ အရသာရှိနေရုံ တင် မက ခရေပွင့်လေး ၏ တင်းကျပ်စွာ ညှစ်ထားပေးမှုကြောင့် ကြာကြာ ထိန်းမထားနှိင်တော့ပဲ ခနလေး ဖြင့် သူ့ကွန်ဒန် ထဲ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်ပြီး ပြီးသွားခဲ့ရလေသည်၊ ဝင်းပပ ခမျာလည်း ပထမ ဆုံးအကြိမ် ဖင်ခံဖူးတာမို့ နည်းနည်း တောာ့ ကျိမ်းစပ်စပ် နှင့် အခံရခက်ခဲ့လေသည်၊ သို့သော်လည်း မိုးအောင်သူ ကို သနားသော စိတ် ဖြင့် ဒါ နောက်ဆုံးပဲ လေ ဟူသော အသိဖြင့် လည်းကောင်း၊ သူကိုယ်တိုင်က လည်း ဖင်အလိုးခံရတာ ဘယ်လိုနေ မလဲ သိချင်စိတ် အငုံ့လေး ကြောင့်လည်းကောင်း ခံဖြစ်သွားခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်၊ ကေ၀ိုင်ဂျယ် များကြောင့်လည်းကောင်း မိုးအောင်သူ ၏ ညှာတာ ကြင်နာမှုကြောင့် လည်းကောင်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သူထင်သလောက်တော့ မဆိုးဟု တွေးနေမိပါသည်၊ မိုးအောင်သူက ခွဲခါနီး ဝင်းပပ နှုတ်ခမ်းလေး ကို အားရပါးရ စုပ်နမ်းရင်း မမ ကို အရမ်းချစ်တယ် ဗျကျနော် တို့ တွေ့တာ နောက်ကျသွားတယ်နော်မမ လည်း မိုးလေး ကို ချစ်ပါတယ်ကွယ်..ဒါပေမဲ့ ဘ၀ ကို လက်တွေ့ ကျကျ မြင်ပြီး ဖြစ်သင့်တဲ့ အမှန်တရားကိုတော့ တို့တွေ လက်ခံကြ ရမှာပေါ့နော်.မ မ နောက် တကယ်လို့ အခွင့်ရ မယ် ဆိုရင်ရော ကျနော့် ကို အခု လို ချစ်ခွင့်ပေး မလားဟဝင်းပပ တယောက် မိုးအောင်သူ မျက်နှာကို ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်ရင်း ခေါင်းလေး ညိမ့်ပြလိုက်မိလေတောသည်..ပြီး။